Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Stockholms län / Upplands-Bro
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 8 12 2020
Upplands-Bro waa degmo koraysa markay noqoto tirada dadka deggan iyo shirkadaha cusub lehna qiyaastii 28 000 oo qof. Halkan waxaa ku yaala laba magaalo oo muhiim ah, Kungsängen iyo Bro iyo baadiye.
325 kiilomitir oo laba jibaaran
Stockholm 40 kiilomitir
Uppsala 49 kiilomitir
Västerås 72 kiilomitir
Degmadan waxay ku ag taala Mälaren, qiyaastii laba miil ayay waqooyi galbeed ka xigtaa Stockholm oo tareenku wuxuu qaataa qiyaastii 25 daqiiqo inuu ku gaaro bartamaha Stockholm.
Degmada Upplands-Bro waxaa ka jira dhowr guri-kireeyayaal kala duwan ah. Shirkada guryaha ee degmadu leedahay magaceedu waa Upplands-Brohus oo boggooda intarnatka ayaad ka akhrin kartaa guryaha banaan.
Luuqadaha lagaga hadlo Upplands-Bro waxaa ka mid ah Fiinishka, Carabida, Soomaaliga, Faarsiga, Daari, Tigriinya, Sawaaxili iyo qaar kale.
Ururo badan oo kala duwan ayaa ka jira Upplands-Bro oo ay ka mid yihiin ururada isboortiga iyo horumarinta hawlaha banaanka lagu qabto. Diiwaanka ururada ayaad adigu laf ahaantaada ka raadin kartaa ururada dhinaca waxyaabaha aad xiisaynayso.
Degmada Upplands-Bro waxay ku dhinac taalaa xeebta Mälaren oo waxay leedahay dhowr xeebood. Waxaa kale oo jira aagag dabiici ah oo qurxoon halkaas oo aad ku tamashlayn karto kana arki karto waxyaabo taariikhi ah. Waxaa ka jira meelo isboorti, hoolka dabaasha, hoyga dhaqanka, maktabad, hoolka farshaxanka iyo waxyaabo badan oo kale. Bogga intarnatka ee degmada ayaad ka akhrin kartaa wixi dheeraad ah ee ku saabsan hawlaha kala duwan ee laga qaban-qaabiyo.
Degmadan waxay leedahay hawlo waxbarasho sida dugsiga xanaanada iyo hoyga maalintii ee qoyska looguna talogalay caruurta u dhaxaysa 1 ilaa 5 sano. Waxaa jira dugsiyo xanaano oo degmadu leedahay iyo kuwa madax-banaan labadaba iyo xanaanada waxbarida.
Degmadan waxay bixisaa dugsi hoose-dhexe ilaa iyo fasalka 9-aad. Waxaa ka jira dugsiyo degmadu leedahay iyo kuwa madax-banaan labadaba. Dhanka dhalinyarada ah da'da dugsiga sare waxaa jira Upplands-Brogymnasiet oo leh barnaamijyo iyo jihooyin kala duwan.
Gudaha degmadan waxaad ka heli kartaa qaabab daryeel caafimaad dhowr ah oo kala duwan. Halkan waxaa ka jira ruggag caafimaad looguna talogalay arrimaha guud iyo caafimaadka caruurta, caafimaadka hooyada iyo daryeelka ilkaha. Gobolka Stockholm boggiisa intarnatka waxaad ka helaysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan meesha aad la xiriiri karto dhanka arrimaha caafimaadka ee kala duwan.
Dhamaan dadka deggan Upplands-Bro waxay xaq u leeyihiin caawimaada turjubaan markay xiriir la yeelanayaan degmadan. Haddii adigaaga deggan aad doonaysid caawimaada turjubaan waa inaad la xiriirtaa shaqaalaha ku qaabilsan ama la xiriirtaa Xarunta xiriirka si aad u hesho caawimaadan.
Degmadan waxay leedahay gaadiidka dadweynaha. Macluumaadka ku saabsan jadwalyada iyo qaababka kala duwan ee loo safro waxaad ka helaysaa bogga intarnatka ee SL.
Gudaha degmadan ama masaafo loo safri karo waxaa laga helayaa shaqo-bixiyayaal waaweyn iyo kuwa yar yar labadaba. Degmada boggeeda intarnatka waxaa ku jira macluumaad loogu talogalay adigaaga xiisaynaya inaad bilowdo shirkad gaar kuu ah. Halkaas ayaa lagu soo bandhigay xitaa fursadaha shaqo ee degmadu shaqo-bixiye ahaan iminka bixinayso.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Upplands-Bro